Home Wararka (Daawo) Wasiir Goodax oo ku eedeeyay Safaaradda Soomaalida China musuqa deeqaha waxbarasho
(Daawo) Wasiir Goodax oo ku eedeeyay Safaaradda Soomaalida China musuqa deeqaha waxbarasho
Wasiirka Waxbarashada JFS Cabdullaahi Godah Barre oo wareysi siiyay Telefishinka BBC ee afka Soomaaliga aya sheegay in dowladda federaalka ah ay deeqaha waxbarasho ee ugu badan ay ka hesho wadamada Itoobiya, Suudaan iyo Masar.
Wasiirka ayaa sheegay in deeqaha waxbarasho ay u bixiyaan qaab isku celcelis boqolkiiba ardayda ugu buudada badan imtixaanka ay qaaddo dowladda Federaalka.
Wasiir Goodax ayaa sheegay in dalka Shiinaha uu bixiyo deeq waxbarasho oo gaareysa aftartan (40) wuxuuna sheegay in deeqdaas waxbarasho marka la keeno safaaradda ay iyada musuqmaasuqda qaarna ay madaxda dowladda siiyaan qaar kalana ay iibsadaan.
Wasiir Goodax aya lagu eedeeyay in sanadihii 2017, 2018 uu isaga shaqsiyan iibsaday deeqihii waxbarasho ee laga helay dalka Shiinaha, waxaana arrinta aadku ula yaabka badan ay noqotay markii arday aan Soomaali ahayn oo sita deeq waxbarasho ay tageen dalka Shiinaha, taasoo keentay in sanadkii 2019 ay dowladda Shiinaha joojisay bixinta Deeqaha waxbarasho.
Wasiir Goodax ayaa dusha ka saaray musuqaas safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Shiinaha.